OromiaTimes: Fincilli maali? Maaliif barbaachisa? (J/ Biraanuu irraa)
Fincilli maali? Maaliif barbaachisa? (J/ Biraanuu irraa)
Waan hundi ruuda (Universe) keessa jiru taateefi baatee [cause and effect] qaba. Waanni tokko waatokko malee hintaane.Gabaabaatti “Waan tokko irraa waa takko dhufa” Fakkaata yaada (logically) kanarra ejjechuun Fincila dudduuba waanni tokko akka jiru tilmaamuun nama hin dhibu. Kanarraa ka’uun hiika ifaafi mul’ataa itti kennuun nama hiyyaaddessu. Fincilli gad xiqqaatu ka namtokke guddatu ka biyyaa tahulleen waa takka mul’isa; fedha ykn danta (interest). Namtokko, murni, sabni ykn biyyi waliin fedhii tokkicha qooddatu mala. Ifatti fedhii waloo qabaachuu dandaha. Fedha kana yoo lagaman ykn fedha biroon yoo haguugame deebisanii argatuuf matuma mataan ykn murnaan (tokkummaan) duuluun kan hinoolle. Wayita kana fedha adda addaa lamatu uumama. Namilleen ykn sabni ykn biyyi fedhii lameen kana duuba bitaafi mirga, gamaafi gamas buhee waldura dhaabbata. Oggaa kana deemsi ykn gochaan fedha ofii deeffachuuf diddaan tahu ykn godhamu fincila jenna. Deemsa (process) kana keessa agarsiisa diddaatu jira. Kun waan hedduun dhugooma. Fiixa deemsa kanaa (calqabaafi dhuma) lameen ijoo barbaachisummaa fincilaan walqixxeessina. Jechuun taateefi baatee gidduu fincilatu jira.